ARCHIVE, LOKSEWA, TIPS » यसरी पढे 'लोकसेवा'को परिक्षामा पक्का पास !
काठमाडौँ - लोकसेवाको परिक्षा तयारी गरिरहेकाहरुको संख्या निकै ठुलो छ नेपालमा । सरकारी जागिर खाने सपना बोकेर लोकसेवा पढ्नेहरु नपढेर भन्दापनि पढ्न नजानेर असफल भइरहेको लोकसेवा अध्यापन गराउनेहरुको तर्क छ। यसैबीच हामीले लोकसेवा अध्यापन गराउनेहरुसँग लोकसेवा पक्का पास हुनेगरी कसरी पढ्ने भन्ने टिप्स मागेका थियौं ।
नेपालमा लोकसेवामा राम्रो नतिजा हाँसील गरेका र लोकसेवाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई पढाउने शिक्षकहरुबाट हामीले लोकसेवाको परिक्षामा पास हुनेगरी पढ्ने १० टिप्स तयार गरेका छौँ । तपाईंपनि लोकसेवाको परीक्षाको तयारी गरिरहनुभएको छ भने, यी टिप्स तपाईंलाई काम लाग्न सक्छ ।
१. धैर्यता परीक्षार्थीमा हुनैपर्ने गुण हो । लोकसेवाको तयारी गर्ने विद्यार्थीलेपनि धैर्यतालाई विशेष जोड दिनुपर्छ। प्लान गरेर मात्र पढ्नुपर्छ । आफु केमा कमजोर छु वा कुन विषय आफुलाई सजिलो लाग्छ वा गाह्रो लाग्छ भन्ने पहिल्याउनुहोस् । कमजोर भएका विषयहरुलाई बढी ध्यान दिनुहोस् । तर सजिलो विषयलाई पनि नपढ्ने गल्ती नगर्नुहोस् ।
३. लोकसेवाको परीक्षाको नियम अनुसार शाखा अधिकृतको लागि चौथो पत्र छान्न पाइन्छ । चौथो पेपर छान्दा अरुको बहकाउमा नलाग्नुहोस् । आफुलाई सजिलो लाग्ने वा आफूले पढेकै विषय छान्नुहोस् ।
७. पत्रपत्रिकामा आउने विचारहरू दैनिक पढ्नुहोस् । समसामयिक घटनाका पछिल्ला अपडेटहरु लिनुहोस् ।
कूटनीतिक तरिकाले उत्तर दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि : सुचनाको हकका बारेमा लेख्न आयो तर कुन धारामा त्यो हक छ भन्ने ‘कन्फ्युजन’ भयो भने जान्ने भएर धारा उल्लेख गर्नु हुँदैन । त्यस्तो बेलामा व्याख्यामात्र गरेर छोड्नुपर्छ । आफ्नो कमजोरी कापीमा लुकाउनुपर्छ ।
८. आइक्यु भनेको 'ट्रिक' लगाउने कुरा हो । यसलाई अलि बढी जोड दिनुहोस् ।
Tags : ARCHIVE, LOKSEWA, TIPS